Ahoana ny fananana ny fikandrana "mamorona antontan-taratasy" taloha ao amin'ny Photoshop CC 2017 | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Photoshop, Tutorials
Nandritra izay 25 taona lasa izay dia misy varavarankely ao amin'ny Adobe Photoshop izay nitoetra tsy mihetsika ara-potoana, ilay iray amin'ireo "antontan-taratasy vaovao" ary izay manokatra ny làlana mankany amin'ireo famoronana, famerenana trano ary famokarana hafa izay azontsika natao tamin'ity fitaovana lehibe ho an'ny famolavolana ity.
Fa izany tokoa ao amin'ny Adobe Photoshop CC 2017 izay niova ho gaga ny maro izay efa zatra io varavarankely io. Betsaka ny mitsikera ampahibemaso an'i Adobe amin'ny fanavaozana ity varavarankely ity, ary betsaka kokoa raha tsy miova sy mandeha izy io, fa toa ny zava-drehetra amin'ny fiainana dia mila havaozina. Izany no antony, raha tsy tianao ny varavarankely vaovao, misy fomba iray hamerenana ilay taloha.
Ahoana no ilazanao hoe Raha tsy vaky izy dia aza amboarina. Ity fitsipika ity, izay ampiasaina amin'ny zavatra maro amin'ny fiainana, tamin'ny farany dia tsy nanampy an'ireo tovolahy tao amin'ny Adobe hanavao ity varavarankely "open document" ity. Azonao atao ny mahita ny fikandrana vaovao etsy ambany:
Fandraisana iray misy singa maro kokoa ary mila fotoana fohy izany mandra-pahazatraanao azy toy ny nitranga tamin'io tenimiafina io izay efa teo am-baravarankely nandritra ny 25 taona lasa. Ary io fa eo am-baravarankely vaovao ireo singa manan-danja dia nandray andraikitra faharoa.
Raha te hiverina amin'ny interface taloha na varavarankely ianao dia mila mandeha amin'ny safidinao ao amin'ny vakizoro ankapobeny ankavia. Avy any, ho hitanao eo ankavanana ny safidy antsoina hoe «Mampiasà lova «Interface Document vaovao»Tokony hofongoranao mba hahafahanao miverina manana ny androm-piainanao, toy ny mety holazain'ny olona iray.
Adobe Photoshop izay mila havaozina isan-taona ary tamin'ity indray mitoraka ity dia singa iray izay nahafantaran'ny maro amintsika ny famolavolana sy ny famerenana sary. Nahazo fanatsarana izy io, saingy fanovana mahavariana ity indray mitoraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Raha malahelo ilay fikandrana "antontan-taratasy" taloha ao amin'ny Photoshop CC 2017 ianao dia misy ny vahaolana
Mandoko trano ho an'ireo vorona tonga mitsidika an'ity mpanakanto ity